IIGLAVU EZI-8 EZIGQWESILEYO ZOKUSEBENZA NGO-2021 - IZIXHOBO
Iiglavu ezi-8 eziGqwesileyo zokuSebenza ngo-2021
Nokuba ungumbaleki wokuqala okanye ingcali, enye yeendlela onokuthi uzinyange ngayo ineglavu entsha. Xa ubaleka, indawo yokuqala ebandayo zizandla zakho. Bakude kude nentliziyo yakho kwaye bahlala bevezwa yimeko.
Kananjalo, xa ubaleka, umzimba wakho wonyusa ukuhamba kwegazi ukuya kumalungu abalulekileyo anjengentliziyo kunye nemiphunga, uwafudumeza. Oku kubangela ukuhamba kwegazi okuphantsi kwiindawo zakho ezinokungonwabi, ngakumbi ezandleni zakho zihlala zityhilwe.
Nangona ukunxiba iigloves ngelixa usebenza ayisiyonto intsha, ukukwazi ukuzisebenzisa ngee-smartphones kunye neewatchwatches kuye kwanda ngokubaluleka.Oku kuye kwakhokelela ekubeni iiglavu zifuna ukusebenziseka lula ngetekhnoloji; igqunyiwe ngokwaneleyo ukuze ikugcine ushushu ngelixa uphefumla ukunqanda ukubila kakhulu.
Ukukunceda ukuba uphonononge iiglavu ezisibhozo eziqaqambileyo ezikhathaza zonke ezo bhokisi. Zikulungele ukuqhuba kwaye ziya kwenza ukubaleka kwakho kube kokonwaba ngakumbi kwaye zikunike ukungonwabi okuncinci. Masikufumane iiglavu ezibalekayo!
1. IArc’Teryx Rho isikhuseli
Ezi gloves ze-unisex zezinye zegloves efanelekileyo kwezentengiso. Zenziwe ngendwangu ye-sTorrent 190, enika ukuzinza kunye nokwelula amandla.
Ezi glavu zenziwe ukuba zilingane ulusu lwakho kwaye zivumele uluhlu olubanzi lokuhamba ngeminwe yakho. Baphefumla uyilo olunceda ukufuma kuphume, ngaloo ndlela kulawula ubushushu ngaphakathi kweglavu.
Zikhaphukhaphu kwaye zinokufakwa ngokulula engxoweni okanye epokothweni. Banazo iipads zenzwa kwiingcebiso zesithupha kunye nomnwe wesikhombisi, ekuvumela ukuba unxibelelane nescreen sedigital ngaphandle kwengxaki. Babalasele kuyo yonke imimandla yento eyenza iiglavu ezimnandi zokubaleka kwaye zixabiseke kakhulu kwimali.
2. I-Nike Therma Fit ebaleka iiglavu zemidlalo
Oku kukhetha kwethu kwepremiyamu yokuqhuba iiglavu. Yenziwe nge-polyester (i-96%), i-spandex, (i-3%), kunye ne-polyurethane (1%), i-Nike Therma Fit Running Athletic Gloves yenzelwe ukuba inxitywe ngokulula ngeegussets eziyilelwe kakuhle ezikuvumela ukuba uphumle isandla sakho kwaye unike intshukumo yendalo. kwiminwe yakho.
Inesigqubuthelo sangaphakathi soboya begusha obugcina izandla zakho zifudumele kwiindawo ezibandayo nezimanzi. Inoboya obusithupha obungaphandle, onokuwusebenzisa njengokusula impumlo kwimeko yempumlo ebusayo ngexesha lokubaleka ebusika. Akuyomfuneko ukuba uye kukhangela izihlunu okanye uthabathe impumlo ngeglavu okanye ibhatyi yakho iphela.
Imathiriyeli yesithupha kunye nomnwe wesikhombisi ikwenziwe ngezinto ezihamba ngesilic ezikuvumela ukuba usebenzise izixhobo zakho zokuchukumisa ngaphandle kobunzima bokususa iigloves zakho. Baziva behle kwaye bayilelwe ngokugqibeleleyo ukubaleka.
3. Isikhuseli seLiner ye-Smartwool
Ezi glavu zeSmartwool zibonelela ngexabiso elifanelekileyo lemali kwintengiso yanamhlanje. Ziyi-unisex kwaye zenziwe ngoboya beMerino (46%), i-acrylic (48%), kunye ne-elastane (8%).
Ezi glavu zenziwe ngokukodwa ukuba zingasindi, zishushu, kwaye zingangeni umoya. Umsebenzi wescreen sokudibanisa unithiwe kwiiglavu ukuze ungaziboni okanye uzive, kodwa bayakuvumela ukuba uchukumise izixhobo zakho ezifanelekileyo ngaphandle kwemicimbi.
Banokubambelela okuhle kwaye banokusetyenziselwa eminye imisebenzi yangaphandle njengokupeyinta, ukuhamba ngeebhayisikile kunye nokunyuka intaba. Iiglavu zinomtya omdaka ogqityiweyo obavumela ukuba bomelele ngexesha lomdlalo wangaphandle kunye nemidlalo.
Phantsi kwesikhuselo seReactor Reactor
Le glavu yangaphantsi kweArmor yenzelwe ngokukodwa amadoda. Yenziwe kusetyenziswa ipholiyesta (9%), inayiloni (7%), kunye neelastane (4%) kwaye inamalaphu amalaphu phakathi kweminwe ukubonelela ngemvakalelo ethambileyo.
Ziyasinda kunye nomtya owenziwe yiColdGear Reactor eguqula iigloves ngokomsebenzi owenzayo, yiyo loo nto yenza ukuba uphefumle kwaye ufudumale, ngqo kwiimfuno zakho. Banokukhusela ngakumbi kwimvula nakwikhephu.
Incam yesithupha kunye nesikhombisi senziwe ngoprinta lweTech Touch, ekuvumela ukuba ufikelele ngokulula kwizixhobo zakho zokuchukumisa isikrini. Inomaleko owongezelelweyo weminwe enokuphinda ubuye umva ukuba iyafuneka. Intendelezo yeglavu inepateni yokubambelela yesilicone ukukunika ukubambelela okungaphezulu.
Bona ngakumbi malunga - Iingcebiso ezi-8 zokubaleka kubanda
5. IiGloves zokolula iiglavu zonyaka
Ezi ziiglavu ze-unisex ezinemibala ye-neon ekwenza ubonakale-ngakumbi ebusuku-ukuze ungathathwa zizithuthi ezizayo. Ezi glavu ziyolulwa kwaye zibumbeke ezandleni zakho ngokulula, zinika uluhlu olubanzi lokuhamba kwimbaleki.
Baneziva zesithupha kunye neminwe ezikunika amandla okusebenza kwisixhobo sakho ngaphandle kwemicimbi. Oku kulungele ukufudumala kwimozulu ebandayo kodwa kunokufuna uboya obungaphezulu ngaphantsi ukugcina izandla zakho zishushu kumaqondo obushushu aqandayo.
I-GORE-TEX INFINIUM Technology yayo ivumela iglavu ukuba ingangenwa ngamanzi kunye nokungena komoya, iyenze iglavu efanelekileyo yokubaleka kwimozulu enzima.
Iitattoo ezingcono kakhulu zabafana
6. Iiglavu ezitsha ezibalekayo ezingasasebenziyo
Ezi glavu zintsha ze-Balance Lightweight zineewulu ezingama-240 zeglasi ze-GSM ezenziwe nge-polyester (95%) kunye ne-spandex (5%), ezenza ukuba zifudumale kwaye zikhululeke ukunxitywa. Banobhontsi wencam yomnwe, okuvumela ukuba uchukumise izixhobo zakho ngaphandle kwengxaki.
Eyona nto ibalulekileyo kwezi glavu kukuba ziyi-antimicrobial kwaye ke ngoko khusela ulusu lwakho kwintsholongwane kunye nakwezinye izinto ezincinci. Zifumaneka ngemibala eyahlukeneyo yamadoda nabasetyhini.
Imvakalelo ilungile njengoko ithambile ngokufudumeleyo kwaye ifudumele. Banobunzima kakhulu kwaye abanaso isixa sezinye iigloves. Banokubambelela okuhle kunokwenza ukuphatha iibhotile zamanzi kunye nezinye izinto ngokulula ngaphandle kokuthatha iigloves kuzo zonke izinto ezincinci.
7. Iiglavu zikaJanji Vortex
okanye umthi wobomi we tattoo
Ezi zezinye zeglavu ezibalekayo kwimarike kwindawo ephezulu yesikali. Yenziwe ngamanqanaba amabini, ingaphakathi loboya oboluliweyo obenziwe nge-polyester (84%) kunye ne-spandex (16%), ngelixa umaleko wangaphandle wenziwe ngokupheleleyo nge-polyester egxotha amanzi.
Iigloves zeJanji Vortex zezona zilungileyo kwiimeko ezahlukeneyo ezinjengomoya, imvula, ikhephu kunye ne-sleet. Banika intuthuzelo kunye nolunye ugcino lobushushu, ukugcina izandla zakho kubushushu obufanelekileyo. Uboya begusha bukwanqanda ukuba izandla zakho zingabile xa uqhuba ixesha elide.
Ezi glavu zine-hi-vis yokubonakalisa itape ngasemva, evumela ukukhanya ukuba kubonakalise umva kwaye kunike indawo yembaleki kwizithuthi ezizayo nasebusuku. Zingasetyenziswa ngelixa uqhuba izixhobo zakho ezifanelekileyo. Zinee-cuffs ezinde zokukhusela izihlahla kwaye iziqwenga zesandla zibangela ukuba iigloves zihlale ngokulinganayo ezandleni zakho, kuthintelwe umoya obandayo ungangeni.
8. Iigloves zeZensah ezibalekayo
Ezi glavu zinobuchwephesha bokuchukumisa okungcono. Zenziwe nge-polyamide (82%) kunye ne-elastin (18%). Imigca ebonakalayo kwiiglavu iyakhanya kwaye ikunike ukubonakala okukhulu, ngakumbi ebusuku.
Ilaphu libonelela ngokuphefumla okongezelelekileyo kwaye likulungele kakhulu ukunxiba. Intende yesandla ngasinye inezixhobo zesilicon ezivumela umntu ukuba abambe izinto ezincinci ngaphandle kokuzikhulula iigloves. Kukho isithupha esincinci suede sokusula impumlo yakho ebalekayo ngenxa yemozulu ebandayo okanye umoya.
Bona ngakumbi malunga - Iibhande ezili-9 ezilungileyo zokuphakamisa ubunzima kuzo zonke iintlobo zokunyusa
Ukuqhuba ii-FAQs zeglavu
Zithini iigloves ezisebenzayo?
Iiglavu zokubaleka ziziiglavu ezenziwe ngokukodwa kuloo msebenzi. Zenziwe ngokudityaniswa kwezinto ezahlukeneyo ezinje nge-polyester, i-acrylic, uboya begusha, kunye ne-polypropylene. Ezi zinto zibonelela ngokuphefumla, ukufudumala, ukujija ukubila, kunye neempawu ezingangeni manzi.
Ukubaleka kunokubangela ukuba izandla zibande, nokuba kusehlotyeni. Ezi glavu zinokugcina iqondo lobushushu lezandla zakho ngengubo yazo yokwambathisa yangaphandle.
Iiglavu ezilungileyo zigcina ukuphefumla kunye nokusebenziseka ngelaphu elincinci kwizandla nakwiminwe. Iiglavu zihlala zenziwe ngeepads ezichaphazela ukuvumela abagijimi ukuba basebenzise izixhobo zabo zokuchukumisa ngaphandle kobunzima.
Zithini izibonelelo zokunxiba iiglavu?
Iiglavu zokubaleka zigcina izandla zakho zifudumele kuqala kwaye ziphambili. Ukugcina izandla zifudumele kubaluleke kakhulu kuba izandla zakho zifumana ukuhamba kwegazi okuphantsi kwiimeko ezibandayo kunye nokushukuma kweengalo kubangela ukuba babande ngenxa yomoya.
Umzimba unokufumana iqabaka kwaye unokufumana isifo sikaRaynaud. Esi sifo senzeka xa umzimba ujongene nobushushu obubandayo kwaye ukuhamba kwegazi kuyehla kubangela ukuvela kolusu, iintlungu, ukuba ndindisholo, okanye ukudumba.
Uninzi lwezi glavu kule mihla zinomoya kwaye azinamanzi, zibonelela ngokhuseleko kwizandla kwimozulu ejikelezileyo.
Yimalini ekufuneka uyihlawule ngeglavu zeglavu ezibalekayo?
Ixabiso lesibini iiglavu ezisebenzayo lixhomekeke kuhlobo kunye neempawu zeglavu. Ezi glavu zinokuza ngexabiso eliphantsi nge- $ 10 kwaye izibini ezikumgangatho ophezulu zinokujikeleza i- $ 75. Wonke umntu unohlahlo-lwabiwo mali olwahlukileyo kodwa kubalulekile ukuqinisekisa ukuba ufumana zonke iimpawu ozifunayo.
$ 30 luluhlu apho umgangatho ophezulu uhlala uhlangabezana nokufikeleleka. Ukuba incinci kakhulu kuwe ke sibonile apha ukuba zininzi iiglavu ezinkulu ezitshiphu kunoko.
Izimvo zomgangatho wedolophu yangasemva kuhlahlo-lwabiwo mali
Iitattoo zasemva kwesizwe emadodeni
I-stackable washer kunye ne-dryer yeengcamango zekhabhinethi
umphambili we tattoo ukugquma uyilo
Iimpawu zomgca omnyama nobomvu